काठमाडौँ : बलिउडमा हरेक वर्ष नयाँ-नयाँ अभिनेत्रीहरु देखा पर्छन्। ती मध्ये केही हिट हुन्छन् त केही फ्लप भएर फिल्म इन्डस्ट्रीबाट किनारा लाग्छन्। यद्यपि अभिनेत्रीहरुका करियर बलिउडमा छोटो या सानो नै मानिन्छ। तर आज हामी तपाईलाई बताउनेछौं बलिउडका यी ५ अभिनेत्रीहरुका बारेमा जो फ्लप भएर पनि राम्रो कमाई गरिरहेका छन्।
• एली एवराम
यस सूचीमा सबैभन्दा पहिले चर्चा गर्ने छौं स्वेडिश ग्रीक मूलकी अभिनेत्री एली एवराम, जो बलिउडमा तीन फिल्ममा देखिसकेकी छिन्। सबैभन्दा पहिले उनी फिल्म ‘मिक्की भाइरस’ मा देखिएकी थिईन। उनले कपिल शर्मासँग फिल्म ‘किस किससे प्यार करूं’ मा पनि काम गरेकी छिन्। तर एलीको बलिउड करियर केही विशेष छैन। यद्यपि उनले बलिउडमा काम नपाए तापनि विभिन्न ईभेन्टबाट ३ देखि ५ लाख भारतीय रुपियाँ आरामले कमाउँछिन्। त्यस्तै उनी एक प्रस्तुतिको लागि ५ देखि ७ लाख रुपियाँ सम्म चार्ज गर्छिन्।
• गौहर खान
पञ्जाबी फिल्महरुमा देखिने अभिनेत्री गौहर खानले लोकप्रियता ‘बिग बोस’ को विजेता बनेपछि पाईन्। गौहर खान एक ईभेन्टको लागि ६ लाख र प्रस्तुतिको लागि १२ लाख रुपियाँसम्म लिन्छिन्।
• श्रिया सरन
दक्षिण भारतीय चलचित्र क्षेत्रकी अभिनेत्री श्रिया सरन बलिउड फिल्म ‘दृश्यम’ मा देखिएकी थिईन। फिल्म त राम्रै चलेको थियो तर श्रियाले केही विशेष लोकप्रियता हासिल गर्न सकिनन्। यद्यपि, दक्षिणका चलचित्रहरूका उनी चर्चित अनुहार हुन् । श्रिया आफ्नो अभिनय बाहेक ईभेन्टमा उपस्थित हुनको लागि ७ देखि १० लाख सम्म चार्ज गर्छिन्।
• नेहा धूपिया
यस सूचीमा बलिउड अभिनेत्री नेहा धूपियाको नाम पनि सामेल छ। नेहा हालै अभिनेता अंगद बेदीसँग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएकी हुन्। फिल्ममा सफलता हासिल नभए पछि नेहाले छोटो पर्दामा पनि हात हालिन् तर त्यहाँ पनि कमाल गर्न सकिनन्। नेहा कुनै ईभेन्टमा जानको लागि ६ देखि ८ लाख, विवाहमा गेस्ट बनेर जानको लागि ७ देखि १० लाख र कुनै ईभेन्टमा प्रस्तुतिको लागि १२ देखि १५ लाख रुपियाँ लिन्छिन्।
• चित्रांगदा सिंह
अन्त्यमा हामी चर्चा गर्ने छौं सुन्दर अभिनेत्री चित्रांगदा सिंहको। चित्रांगदा बलिउडका थुप्रै फिल्महरुमा देखिसकेकी छिन् तर उनको करियर केही खास रहन सकेन। उनी फिल्म ‘ये साली जिन्दगी’ र ‘देसी ब्वाईज’ मा देखिएकी थिईन। फिल्मले त केही विशेष कमाल देखाउन सकेन तर उनी एक ईभेन्टमा जानको लागि १५ देखि १८ लाख, विवाहमा गेस्ट बनेर जान १५ लाख र प्रस्तुतिको लागि १८ लाख रुपियाँ लिन्छिन्। एजेन्सी
प्रकाशित : सोमबार, असार २५, २०७५१५:००
न्युड भएर मेगनले पार गरिन् बोल्डनेसको सारा हद, तस्बिरमा स्पष्ट देखियो गुप्त अंग
‘जय शम्भु’ को पहिलो गीतमा अनुप र बर्षाको रोमान्स – [भिडियो]
यसकारण हेर्नुहोस यी चर्चित अभिनेताको फिल्म ‘विश्वरूपम 2’!
क्यान्सरसँग जुधिरहेकी यी चर्चित अभिनेत्रीलाई अनुपमले गरे यस्तो भावुक ट्विट!
कुनै बेला मुम्बईको रेलवे स्टेशनमा सुत्थे अनुपम खेर, यस्तो उनबारे केही रोचक सत्य-तथ्यहरु
यी हुन् ,५ बहुचर्चित बलिउड सेलिब्रेटीका निकै सुन्दर छोरीहरु…..
‘महाभारत’मा कृष्ण बन्दै आमिर खान !